ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: ကိုယ်ရောင်ပျောက်သွားခြင်း
လက်တို့တောင်းရင် ရှက်ဖို့ ကောင်းတယ်။
ခင်မြားဗျာ.. ဆေးနည်းများ ပေးမှာဖြင့် မြန်မြန်မပေးဘူး။အိုင်တင်တွေ။မူလကျီတွေ။ဘူလချီတွေ။ဘာဂျီတွေ(ကုလားပြည်အနေကြာသွားတော့ ကုလားစကားတွေရောသွားတာ) လုပ်နေတယ်လို့ အထင်တော့ ခပ်စောစော မစမောပါနဲ့ဦး။ကျွန်တော်လဲ စင်ပေါ်ရောက်တုန်း ကိုယ်ပဲအလှည့်ဆိုပြီးတော့ အပြတ်ကို ဟဲချင်သေးတာပေါ့။ “ အချစ်ရေ ကိုယ်ဟာ မုဆိုးမပါ။အချစ်ရေ ကိုယ်ဟာ နတ်ဆိုးလေးပါ။”ရေချမ်းအရင်တုန်းကပေါ့။သီတင်းကျွတ်ရေကျော်ပွဲတွေ လုပ်ရင် ဘာရမလဲ ကိုယ်ရဲ့ အသံပြာ၊အသံဝါ၊အသံနက်၊ အသံတက်ဂနီကာလာစုံနဲ့ စတိတ်ပေါ်တက်ဟဲချင်တာပေါ့။ဟဲသာဟဲချင်တာ သီချင်းဆိုရင်တောင် စာသားက အပြည့်အဝမရဘူး။ဟိုနားစပ်စပ် ဒီနားစပ်စပ် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ့ လဒကြီး လှည်းကြိတ်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ။ရေချမ်းအမေကဆို “စင်ပေါ်တက်မဆိုပါနဲ့လားသားရယ်။အားပေးမယ့် ပရိတ်သတ်တွေကြောင့် အမေတို့အိမ်လေး တိုက်ဆောက်စရာ အုတ်ခဲတွေရနေပါဦးမယ်”တဲ့။
“အရင်ထဲက မကြီးတဲ့ အထင်များ သေးလိုက်တာအမေရယ်။ရေချမ်းအသံ မိုးထက်ညံအောင်ကို ဆိုပြဦးမှာပါ။အားပေးမယ့်လူမရှိလဲ နားလေးလို့သွားရအောင်တော့ ရေချမ်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။”
အဲဒီတုန်းကများဗျာ ကြမ်းကြမ်းအဖေ ရပ်ကွက်လူကြီးလဲ သူသမီးလုပ်ဇာတ်ကို ရှက်လို့ သူ့မျက်နှာ ဘယ်နားထားရမလဲလို့ ဒေါသလှိုင်လှိုင်ထပြီး ပြောပြောနေတာ။ချောင်းကြည့်နေတဲ့ ရေချမ်းလဲ ကြားဖန်များတဲ့ ဓာတ်ပြားဟောင်းဖြစ်ဖြစ်လာတော့
“ဦးလေးရေ ……ဦးလေးမျက်နှာကြီး ထားစရာမရှိရင်လဲ ရာမဇာတ်ပွဲထဲက ဒဿခေါင်းနဲ့သာ လဲထားလိုက်တော့ဗျာ”
လို့ဆိုပြီး အော်လဲပြေး။ ဦးကြက်ဖဆီ ရောက်နေတဲ့ ကြမ်းကြမ်းအဖေ ဒေါသလဲ ရေချမ်းနောက် တောက်လျောက်ကို လိုက်တာ တွေးသာကြည့်တော့ဗျာ။လိုက်ရင်းနဲ့ မော။မောရင်းနဲ့ ပြေး။ပြေးရင်းနဲ့ ဆွေးနေတဲ့ သူဖိနပ်သဲကြိုးကြီး ဗြုတ်ခနဲပြတ်။ ဘုတ်ခနဲဆိုပြီး မှောက်ယှက်လဲတာ ရပ်ကွက်လူကြီးလဲ ကာယားကြီးကို လန်လို့။တော်သေးလို့ဗျ လန်သာလန်သွားတာ အောက်ခံလေးတစ်ထပ်ပါတော့ ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့ ရေချမ်းလဲ ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ လျှပ်တပျက်ရိုက်ချက် မခံလိုက်ရတာ။
“ဥုံ ရတာမလို လိုတာမရ
ဆိုပြီး အထက်ပါ အောက်ပါ အဝီစိပါမကျန်အောင် စိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီး ရွတ်နိုင်သလောက် များများရွတ်။များများရွတ်လေ မြန်မြန်ပျောက်လေပဲလို့တောဆိုသတဲ့ဗျာ။
ရာဂဘ၀င်ကို ဖန်စေ၏ ။
လုံးစုံဘ၀ကို ချုပ်စေ၏ ။
" အချစ် " ဖြစ်၏..........။”
ကြမ်းပိုးအမတစ်ကောင်၏ အပေါ်အရေခွံကို ခွာပါ... ထို့နောက် ဆား စာပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကို မီးကင်ပြီး ၃ ရက်တိတိနေလှန်းပါ....
နေလှန်းထားသော ဆားနှင့် ငြုပ်ကောင်းစေ့ကို ဆတူရောထောင်းပြီး ရေနွေးဖြင့် ကျက်အောင်ပြုတ်ပါ။
နေပူ ၆ လတိတိ ပြပါ...။ပုလင်းတစ်လုံးထဲ ထည့်ကာ မြေအောက် ၆ ပေအနက်တွင် ၆ လ ထပ်မြှုပ်ထားပါ...
၆ လကြာလျှင် အဆိုပါ ပုလင်းကို ဖော်ပြီး မိမိပျောက်စေချင်သောနေရာတွင် လိမ်းပါ။ :P
ကျွန်တော်ကတော့ မရေမရာကြက်ဖကြီးပေးတဲ့ ဆေးပုလင်းအညွန်းစာကိုဖတ်ပြီးမှာတဲ့အတိုင်းလုပ်တာ ပြောက်တယ်ဗျာ။ပြောရင်းမှ သတိရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်က “ကိုယ်ယောင်ပျောက်ဆေး” တဲ့။ဆော်ရီး စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့ဗျာ။:P တာ့တာဗျာ။ဘိုင်းဘိုင်း။
ကျွန်တော် အမြဲသွားငေးနေကြဖြစ်တဲ့၊ ကျွန်တော်ရဲ့ စာများကို လာရောက်အားပေကြတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမ ဘလောဂ်ဂါများဖြစ်ကြသော
အမအပြုံးပန်း၊ မရောင်(မေတ္တာရောင်ပြန်)၊ တောထဲကဇာတ်လမ်းလေးတွေရေးတဲ့ မငယ်နိုင်၊ ဟင်းကောင်းတွေ ချက်ချက်ကျွေးတဲ့ မဂျာ(ဂျာမုန်းဒန်)၊ တကယ်တမ်းမာယာ မများတတ်တဲ့ မနှင်း(နှင်းနဲ့မယာ)၊ ကန္တာရကြီးကို မိုးတွေသည်းပေးတဲ့ မငုံ(ကန္တာရမိုးစက်များ)၊ ရန်ကုန်မှာ အလည်သွားနေတဲ့ ညီမဇော်(ကျွန်တော်တို့အိမ်)၊လေထဲမှာပဲ ဝဲပျံနေတဲ့ ညီမကောင်းကင်(ကောင်းကင်သမီးပျို)၊ ကန္တာရမြေကို ကျောခိုင်းတော့မည့် ညီမDIM(ဖြူစင်ကြယ်) ၊ချည်ပေါင်မစားရရှာဘူးဆိုတဲ့ ညီမ စိတ်၏ဖြေရာ၊တစ်ကို အမြဲဦးအောင် နေရာယူတတ်တဲ့ ညီမ ဝက်ဝံကလေး ၊မေမြို့မှာသွားနေချင်တဲ့ ညီမအနော်၊နို့သောက်ပြီးနိုး (No)နားထောင်တယ်ဆိုတဲ့ညီမနေခြည် ၊ c for chan ကို တဂ်သွားတဲ့ ညီမဝိုင်း၊အမလား ညီမလားမေးထားတာ မပြောသေးတဲ့ အမရာ၊ မောင်လေး(ကောင်လေးငယ်)နဲ့ စာအတူတူ ရေးကြတဲ့ မချစ်ရ၊ yakiniku ကြော်ကျွေးတဲ့ ခွန်သဒ္ဒါ၊ နှုတ်ဆက်ခြင်းကဗျာနဲ့ ရှေးဆက်မတိုးသေးတဲ့ ညီမကြယ်ဖြူစင်၊ စိတ်ထဲရှိရှိသမျှဆိုပြီး ကဗျာလေးရေးတဲ့ ရွှေညာသူလေး(ခ)မိုးစက်ပွင့်လေး၊ မန္တလာသူလေး မန်းလေရူး၊ မချိုကိုးသဇင်၊ဖိတ်စာနဲ့တကွ ကြွလာပြီးမှ လက်မှက်ပြောက်သွားပါတဲ့ လင်းကြယ်စင် ……..
အလုပ်တွေနဲ့ ပိပြီးပြားနေတဲ့ သယ်ရင်းကြီးအယ်ကေဖြူ(လင်းကြယ်ဖြူ)၊ ဆရာမင်းလူစာတွေ ကြိုက်တဲ့ ကိုရေတမာ၊ အတွေးအားအားကောင်းကောင်းနဲ့ ကိုလူထွေးကြီး၊ သုတစွယ်စုံကြီး ကိုတာ(ကိုပီတာ)၊ကဗျာတွေ လှိမ့်ရေးတဲ့ ကိုဟန်၊ဇော်နဲ့ မွေးရက်တူလတူ ညီလေးဖိုးစိန်၊ချစ်ဇနီးချောရဲ့ ကိုယုယ
(ဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့ဘူးတာ။:P)၊ ထိထိမိမနဲ့ အတွေးကောင်းဝတ္ထုတို လေးတွေရေးတဲ့ ကိုနွေဆူး(နွေဆူးအလင်္ကာ)၊စာသားလှလှလေးတွေ အရောင်ခြယ်ကဗျာဖွဲ့တဲ့ ညီလေးမိုးစက်အိမ်၊ သိဟ်ရာသီဖွားများဖြစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းသီဟသစ် နှင့် ညီလေးဧရာဝတီသား(ပျောက်ချက်သားကို ကောင်းနေတာ။)၊ ရန်ကုန်ပဲ သတိရနေတဲ့ စိုင်း(စိုင်းလောင်ပိန်း)၊ အတွေးနဲ့နှိပ်စက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကိုနေစိုးနိုင်၊ ဒဒွေးက ကိုမိုးမှောင်၊ ငါကိုနားလည်ပါဆိုတဲ့ လင်းငယ် (လင်းငယ်၏ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်)၊ မအိမ်ကံ အခန်းဆက်ကြီးရေးနေတဲ့ ကိုရီနိုမာန်၊ ဘရိုလို့ ခေါ်တတ်တဲ့ ညီလင်းဆက်၊ သိလား?(သိဘူး။:P)ဆိုတဲ့ အဖြူလေး၊ မလေးမြေမှ ညီလေးခရာတွန်၊ သူစာတွေပြန်ရေးသွားမှ ဟင်းချလိုက်မိတဲ့ မြစ်ကျိုးအင်း(စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက်မို့ ပါ)၊ မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ)ကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ပါဆိုတဲ့ ရင်ဘတ်ကြီး (ခ)ဘကြိုင် (ချဉ်ပေါင်ခြံ)၊ ကဗျာအားအရမ်းကောင်းတဲ့ ကောင်းကင်ကို၊ ကျောက်တွေကြည့်ပြီး ပြုံးနေတတ်တဲ့ ငချမ်းကောင်၊ အိုင်တီအကြောင်းတွေ ရေးကြတဲ့ ညီလေး လောလောဆည် နှင့် ညီနေမင်း၊ မချစ်ရရဲ့မောင်လေး ကောင်ငယ်လေး၊လနဲ့ချီ ပြောက်နေတဲ့ ခေတ်ခမ်းကောင် ။ရေးရင် အများကြီးဗျာ။နာမည်မရေးမိခဲ့တာရှိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ။
စာရေးသူ Unknown အချိန် 10:06 PM
Waing October 13, 2009 at 11:27 PM
အမြဲ ၁ဦးနေတတ်တဲ့ ၀က်ဝံလေးရေ....သနားတယ်
Waing October 13, 2009 at 11:28 PM
၃ရောပဲနော် ဟိဟိ :)
Waing October 13, 2009 at 11:29 PM
ကိုချမ်းရေ တစ်လတိတိ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်သွားပြီလား
khun October 14, 2009 at 12:21 AM
မန်းလေရူး October 14, 2009 at 2:10 AM
ပြန်ပေါ်တဲ့ ဆေးလေးလည်း ဆောင်သွားဦးနော်း)
Unknown October 14, 2009 at 2:46 AM
ကိုချမ်း ဘယ်သွားမလို့လဲ။ မငုံလဲ မအားတာနဲ့ ပျောက်နေရတယ်။ မဖြူ နေကောင်းတယ် မလား။ မြန်မြန်ပြန်လာနော့။ ပြန်လာရင် မုန့်ဝယ်လာ
မောင်သီဟ October 14, 2009 at 2:48 AM
း) ရေးထားတာရီရတယ် တပုဒ် ဖတ်ပြီး
linn October 14, 2009 at 3:17 AM
ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ဆေးလာသောက်ဆိုလို့ သောက်တယ်.. နံမည်စာရင်းထဲ မပါရင်ရော သောက်ရမှာလား ...(ထီပေါက်ပြီး ထီလက်မှတ်ပျောက်နေသလိုပါပဲလားနော်..) မသေချာလို့ မသောက်ပဲ ပြန်ရကောင်းမလား... အလကား စတာ ..ပြန်လာရင် မုန့်ဝယ်လာနော် ...လက်မှတ်မရှိတော့ တန်းလဲစီပြီးပြီဆိုတော့ တိတ်တိတ်လေး ခိုးသောက်ပြီးပြန်သွားပြီ..
emayarKhin October 14, 2009 at 6:00 AM
Unknown October 14, 2009 at 7:18 AM
ကျွန်တော် ရန်ကုန်ပြန်မလို့ပါ။ဇနီးသည်က အရင်ပြန်သွားနှင့်တော့ ကျွန်တော်လဲ မှီရာယာဉ်ပျံကြီးကို ဘီးဖက်ပြီး ကိုယ်ရောင်ဖျောက် ယုံတင်လေးပါ။ ပျောက်မသွားပါဘူး။ ပျောက်ဆေးပေးပြီး ဖြေဆေးကျန်သွားလို့။
ဖြေဆေးက ပေါင်ဒါမှုန့်ဘူးကြီးကြီး တစ်ဘူး ကိုယ်ပေါ်လောင်းချရုံလေးတင် တမဟုတ်ခြင်းကို ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။
သားသားလေးတစ်ယောက် လာမည့် ၂၁ မှာ လာတော့ပါမယ်။ ဝိုင်းပြီး ဆုတောင်းပေးကြပါဦးဗျာ။
စိမ်း... October 14, 2009 at 9:23 AM
မောသွားတယ်.... ဆေးနည်းဆီရောက်ဖို့ စောင့်ဖတ်ရတာ... :)
ဝက်ဝံလေး October 14, 2009 at 12:36 PM
အမလေး သူကိုယ်ရောင်ဖျောက်တာ ဖတ်ရတာလဲ မူးနောက်သွားတာပဲ ကိုရေချမ်းရယ် ဟွန်းးး
ဝိုင်း ကျောင်းသွားနေလို့ပါနော် မဟုတ်ရင် တစ် တယ် အဲ တစ်ရတယ် ဟွင်းးး သနားလို့ သနားလို့ ဝိုင်းကို ၁ ယူခိုင်းထားတာ ဘာမှတ်လဲ ငွားးးးငွားးးးးးးး
Unknown October 14, 2009 at 2:14 PM
ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ ကဲဝိုင်းရေ တစ်ရတာ ဝက်ဝံကလေးက ကျောင်းသွားနေလို့တဲ့။
ကိုလူထွေး October 14, 2009 at 2:19 PM
တလတော်ဆိုတော့ တယ်ကြာပါ့လား ကိုချမ်းရ... ကိုရေချမ်းခရီးသွားနေသည် လုပ်မလို့လား...
သမီးပျိုဆို ခရီးက ပြန်လာပြီးကတည်းက မပေါ်တချက် ပေါ်တချက်... ကိုချမ်းလည်း ပြန်ပေါ်ဆေး တခါတည်း ယူသွားဦး...
မိုးစက်အိမ် October 14, 2009 at 3:41 PM
အစ်ကိုရာ အစ်ကိုပါ ပျောက်တော.မယ် . . . ကြက်ဖ
ကတော. ဒီမှာလည်း တစ်ကောင်ရှိတယ် လူကြက်ဖ
တွေများတော်တော်ဆိုးကြတာဘဲ . . . ပေါက်ကရ
ဟော်လိုမန်း ဖြစ်နေမှ ဖြစ်ရင် တုတ်ကောက် :P
ကိုရေချမ်း ဇာတ်ကောင်လေး ပြန်လာချိန် မျှော်နေပါ
Sein Lyan October 14, 2009 at 4:23 PM
naychi October 14, 2009 at 9:18 PM
ကာရံဆူး October 14, 2009 at 9:53 PM
ကိုချမ်းရေ..ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီးရင်လည်း ပြန်လာဖို့ မေ့မနေနဲ့ ..ဇနီးနဲ့ သားသားလေး အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်...ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ..
မချစ်ရ October 15, 2009 at 2:36 AM
လာပြီ ပေါက်တတ်ကလောက် ကတော့
စိတ်၏ဖြေရာ October 15, 2009 at 1:19 PM
mysterysnow October 16, 2009 at 11:24 AM
Angel Shaper October 20, 2009 at 8:37 PM
တစ်လလုံး မောင်ဝင်းကြည်နဲ့ပျော်ပါစေ။ ဟဲဟဲ
ဒဏ္ဍာရီ November 20, 2009 at 9:01 PM
တကယ့်ကို ဘာများလဲလို့ ဖတ်နေတာ။ ဖတ်ရင်နဲ့ ပြုံးမိပါတယ် ကိုချမ်းလင်းနေရေ .... ရေးလည်း ရေးတတ်ပါတယ်။း)
ကိုယ်ယောင်ပျောက်ပြီး ပြန်မပေါ်ပဲ နေအုံးမယ်နော်။ နောက်ကျမှ ပိုစ့်လေးကို လာဖတ်ရလို့ တောင်းပန်ပါတယ်။